Qaab dhismeedka sawir (qaybta I): miisaanka muuqaalka | Abuurista khadka tooska ah
Ka hor naqshad wax kasta, ha ahaato a web, a kartel xayeysiin ama wax fudud kaarka ganacsiga waa inaad leedahay xoogaa fikrado aasaasi ah halabuurka iyo miisaanka muuqaalka aad u cad si aan loogu sameynin naqshad qaldan oo aan dheellitirnayn daawadayaasha hortiisa.
Iyagu waa saldhigyada loo adeegsaday taariikhda fanka rinjiyeyaasha iyo naqshadayaasha, gaar ahaan tan iyo Renaissance, iyo tan hadda jirta dadweeynaha y naqshadeeyayaasha.
Haddii muuqaal ahaan waxa loogu yeero miisaanka muuqaalka laguma dhejin doono meeshiisa iyo halabuur isku dheelitiran waxay ku abuuri doontaa daawadayaasha, xitaa haddii aysan lahayn aasaas aragtiyeed oo lagu aqoonsado, nooc ka mid ah walbahaarka uusan garanaynin sida wanaagsan ee loo qeexo laakiin ay awood u yeelan doonto garasho. Tani waa sababta oo ah maskaxdu waxay u baahan tahay inay aragto sawirro dheellitiran waqti kasta.
Si aad u bilawdo waa inaad ogaataa in miisaanka muuqaalka Waa cunsur ka mid ah sawir ama halabuur si gaar ah u soo jiita daawadayaasha astaamo kala duwan awgood:
- wanaagsan maxaa yeelay waan da 'weynahay cabir inta kale, culeyska ayaa ka weyn
- maxaa yeelay waxay ku taal a aagga ama mid kale: walxaha ku yaal aagga midig ama hoose waxay leeyihiin culeys muuqaal oo ka weyn haddii ay ku yaalliin dhinacyada ka soo horjeeda.
- ah foomamka si fudud loo aqoonsan karo oo joogto u ah qaababka aan la taaban karin ayaa qaada culeys weyn.
- ah midabka walxaha ku jira halabuurka ayaa sidoo kale saameeya culeyska midba midka kale. Tusaale ahaan, midabada diiran waxay ka miisaan badan yihiin kuwa qabow, midabada madowna waxay ka miisaan badan yihiin kuwa fudud. Si la mid ah waxay u saameysaa iska Iyada oo salka ku haysa, shay si aad ah looga soo horjeedo asalkiisa ayaa culeyskiisu ka badan yahay kan aan aad loo barbardhigin
Dad badan ayaa awood u leh in la sameeyo si kaamil ah iyada oo aan loo baahnayn daraasado hore, dareenkooda ayaa ka dhigaya iyaga inay abuuraan halabuur kaamil ah. Laakiin haddii aysan taasi ahayn, waxaa ugu wanaagsan in la qiyaaso in sawirkeennu ku dhex yaallo sanduuq ay taageerayso barta dhexe, haddii nuxurkaasina uu sababo inuu dhinto labada dhinacba, waa sababta oo ah sawirka oo si liidata u dhisan. . Waxaan idiinka tegayaa qaar ka mid ah tusaalooyinka tusaalooyinka si aad si fiican u fahamtaan.
sawirro: sawir fudud
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Qaab dhismeedka sawir (qaybta I): miisaanka muuqaalka